नवलपुरकाे अरूणखाेलामा बस दुर्घटना हुदा ६ जनाको मृत्यु – www.janabato.com
नवलपुरकाे अरूणखाेलामा बस दुर्घटना हुदा ६ जनाको मृत्यु
४ कार्तिक २०७५, आईतवार ०१:४९ October 21, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
बिष्णु गाैडेल/पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिका–११ अरुणखोलामा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएकाे छ । दुर्घटनामा परी कम्तीमा ३६ जना घाइते भएका छन् ।
इटहरीबाट भैरहवाका लागि छुटेको लु १ ख ८४ ५४ नम्बरको बस आइतबार बिहान ५ बजे अनियन्त्रित भई सडकबाट खसेको हो । बसमा सवार ५ जनाको घटना स्थलमा नै र एक जनाकाे उपचारकाे क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले बताउनुभयो । मृतकहरुको नाम ठेगाना खुल्न सकेकाे छैन ।
बसको बत्ती मधुरो रहेको र गति तीव्र भएका कारण बस दुर्घटनामा परेको यात्रुलाई उदृत गर्दै प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो । दुर्घटनामा घाइते भएका २७ जााकाे पुरानाे मेडिकल कलेज भरतपुर र ९ जनाको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भैरहेको छ । दुर्घटनाको थप विवरण आउन बाकि रहेकाे छ ।
← चराको राजधानी ‘जगदिशपुर ताल’मा डुङ्गा संचालन
राज्यसत्ता प्राप्तिका लागी जनताले हतियार उठाइरहनुपर्छ : –बरबर राव, भारतीय बरिष्ठ संस्कृतिकर्मी →
यस्तो छ प्रदेश ५ को स्थीतिपत्र (पूर्ण पाठ)
३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०३:४४ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on यस्तो छ प्रदेश ५ को स्थीतिपत्र (पूर्ण पाठ)
३१ भाद्र २०७५, आईतवार १५:१३ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on निर्मला पन्तको न्यायको पक्षमा बुटवलका स्रष्टाहरु सडकमा उत्रिए (फोटोसहित)